थाहा पाउनुहोस् , कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
हिन्दु धर्म अनुसार शरीरका अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने राम्रो र नराम्रो घटनाबारे संकेत गर्छ ।वर्तमान समयमा यी कुरा विश्वास गर्न निकै कठिन हुने भए पनि यसलाई पुरै बेवास्ता गर्न सकिन्न ।थाहा पाऔँ शरीरका विभिन्न भागमा हुने फर्फराहटले के संकेत गर्छ ? मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै सं’वेदनशील हुन्छ ।
यही कारण भविष्यमा हुने घ’टनाप्रति हाम्रो शरीरले पहिले नै आशं’का गरिरहेको हुन्छ । शरीरको विभिन्न अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने घटना र धनलाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना :
१. दुवै गाला फर्फराउँदा धन प्राप्त हुन्छ ।२. ढाड फर्फराए केही वि’पदको सम्भावना रहन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **३. हातका औँला फर्फराउदा ।४. मुटुको उपल्लो भाग फर्फराए झगडा हुने सम्भावना रहन्छ ।
५. बायाँ खुट्टा फर्फराउँदा कतै यात्रा गर्ने सम्भावना रहन्छ ।६. मुख फर्फराउँदा छोराबाट शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।७. दाहिने आँखाको आँखीभौ र आँखा फर्फराउँदा तपाईंले चाहेका सबै इच्छा पूर्ण हुन्छन् भने बायाँ आँखा र आँखीभौ फर्फराउँदा शुभ समाचार प्राप्त हुन्छ । तर, यदी दाहिने आँखा फर्फराए शारीरिक क’ष्ट हुने गर्छ ।